China Green Tea Chunmee 8147 fekitori uye vagadziri | Yibin Tea
Chunmee tii 8147
Chinese inonaya tii, inonaya tii yakatorwa kubva yakanatswa Chunmee tii, kuverenga pamusoro peanopfuura 10% yezvigadzirwa zveChunmee tiyi akateedzana. Iwo akapedzwa tii mitsetse ari nyoro uye akaumbika, aine girini ruvara uye chando, nyowani uye gobvu hwema uye mellow kuravira
kuomarara, yakatwasuka, chimiro chesiye
inorema mellow kuravira, inozorodza
Chii chinonzi Chunmee Green Tea?
Chunmee Green Tea ndiyo Chai inobereka kwazvo chai. Iyo ine yakatsiga yekutengesa misika, uye ndiyo inonyanya kufarirwa tiyi yepasi.
"Chunmee" chinese zvinoreva "tsiye", saka rakazowana zita raro nekuti ziso rayo rakaumba mashizha akaoma.
Kubatsira kwekunwa chunmee tii:
1. Batsira kudzikisa huremu, batsira kugaya;
2. Antisepsis uye anti-kuzvimba
3. Deredza Ropa Lipids uye Pressure.
4.Zorodza, bvisa kunetseka. anti-kuneta uye nezvimwe.
Zvimiro zveiyi tii inonhuwirira yakakwira, yakapfuma bubble, yakasimba uye yakapfava kuravira
Unogona kubika iti neshuga muhari yetii kwemaminetsi akati wandei kana kuwedzera mamwe mashizha eminti kuti itaridze zviri nani.
Unoziva Algeria here?
Democratic People's Republic of Algeria, kana "Algeria" muchidimbu, inyika iri muMaghreb kuchamhembe kweAfrica. Inogumira Gungwa reMediterranean kuchamhembe, Libya neTunisia kumabvazuva, Niger, Mali neMauritania kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva neSouth, neMorocco kumadokero. Algeria ine nzvimbo yepasi yakakura mu Africa, Mediterranean uye nyika dzeArabhu, uye iri pachinzvimbo chegumi pasirese.
Huwandu hwevagari veAlgeria huri mamirioni makumi mana nemakumi maviri nemaviri (2017). Vazhinji maArabu, achiteverwa neBerbers (ingangoita 20% yehuwandu hwevanhu). Iwo madzinza mashoma ari Mzabu neTuareg. Mutauro wepamutemo chiArabic, uye chiFrench chinowanzo shandiswa. Islam ndiyo chitendero chehurumende. Algeria ndiyo nyika hombe neFrance semutauro wekutanga wekune dzimwe nyika.
Chiyero chehupfumi cheAlgeria chinopinda pechina muAfrica. Chikafu uye zvezuva nezuva zvinodikanwa zvinonyanya kubva pane zvinotengeswa kunze kwenyika.
ChiIslam chine simba rakakura patsika dzehupenyu dzevaAgeria. Mwedzi wetsika tsika "Ramadan" inopembererwa mumwedzi wepfumbamwe wekendendende yeIslam gore rega.
VaMuslim vanonamata kashanu mangwanani, masikati, masikati, manheru uye usiku munzira yekuMecca. Chishanu izuva ravo rekunamata, uye vanhu vachaenda kumosque kunonamata pamwe chete pazuva iri.
Algeria haifanire kushandisa nguruve uye mhuka senge nguruve senge mapandas senge nzira dzekushambadzira.
Mune dzimwe nzvimbo dzekumaodzanyemba kweAlgeria, vanhu vanofarira varungu. Zvinonzi chena inogona kuratidza mwenje uye kudzivirira kupisa kuenderana nemamiriro ekunze anopisa. Izvo zvakare nekuti ivo vanoona chena sechiratidzo cherunyararo.
Kirasi yepamusoro muAlgeria inoda kutaura French. Kana muyenzi akataura mashoma mazwi muchiArabic, muridzi anofara.
MuAlgeria, tii ndicho chinwiwa chekugamuchira vaenzi, uye vanofarira kunwa girini tii. Kana iwe uchinge wakokwa kune imwe imba yeAgeria, iwe unofanirwa kuunza zvipo kune iye ari kukoka.
Tea inopinza muAlgeria
Tea yekutenga vhoriyamu: 14,300 matani (muna 2012, yakave yechitatu muChina green green kunze kwenyika)
Yakajairwa tii kurongedza: 85g sachet kurongedza, 125g sachet kurongedza
Green tii mhando: pfuti pfuti tii, chunmee tii
Kazhinji nhamba dzetii: 3505, 41022, 9371
Pashure: Green Tea Chunmee 9368
Zvadaro: CTC 2 # Nhema tii
GINGER CHUNMEE TI